Nhau - Recyc Yakagadziriswa Zvakatipoteredza Micheka Yakapfava Iwo Maitiro Makuru MuRamangwana Indasitiri
Kambani yemubereki yaZara Inditex Group yakazivisa pamusangano wayo wepagore musi waChikunguru 16, 2019 nguva yemuno kuti zvitoro zvayo zvinosvika mazana manomwe nemazana mashanu zvichawana kugona kukuru, kuchengetedza simba uye kuchengetedza zvakatipoteredza na2019 Asati gore ra2025, 100% yezvigadzirwa zvezvinhu zvese zveboka, kusanganisira Zara, Dhonza & Bear, uye Massimo Dutti, ichagadzirwa nemachira akasimba.
Nedzidziso yeEU nhungamiro nerutsigiro rwehomwe dzemachira, kudiwa kwepasi rose kwezvipfeko zvakashandiswazve kuri kuwedzera, uye tekinoroji yemachira akadzoreredza zvakatipoteredza ari kuramba achiwedzera kukura, saka machira akazotumbuka mumadhorobha makuru emachira. Uye zvakare, pfungwa yevatengi yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kusimudzira kusimukira kuri kuramba kuchisimba nekusimba, saka ivo vari kuda kwazvo kutenga zvipfeko zvekudzivirira zvakatipoteredza, saka kuwedzera kwekutengesa kwerudzi urwu rwejira kwakakwira.
Vazhinji uye vazhinji vatengi vefashoni vakarasa kufarira zvipfeko zvine opaque sosi uye rakaomarara mashandiro, uye vatanga kutsvaga maitiro etsika, anogara kwenguva refu, akapfekedzwa zvipfeko uye zvishongedzo. VaZhang vakadzidza kuburikidza nekutengesa kwavo kweyavo yakadzoreredzwa micheka inochengetedza zvakatipoteredza kuti kutengesa kwemachira akadzoreredza zvakatipoteredza kuchaputika muna 2020, inova ndiyo tsika huru mune ramangwana.
Kubvumidzwa kwe `` ECO CIRCLE '' kubvumidzwa kunogona kuderedza zvakanyanya mutoro wezvakatipoteredza.
1) Kudzora mashandisiro ezve zviwanikwa-zvakaneta zviwanikwa.
Inogona kudzora kushandiswa kwepeturu peturu zvinhu izvo zvinoda kugadzira polyester mbishi zvinhu.
2) Kuderedza kuburitswa kwemagreenhouse gasi (CO2)
Inofananidzwa nenzira yekurasa marasha, inogona kudzora zvakanyanya kubuda kweye greenhouse gasi.
3) Kudzora marara
Izvo zvinoshandiswa zvigadzirwa zve polyester hazvichisiri marara asi zvinogona kunyatsoshandiswa zvakare se zviwanikwa. Iyo inogona kupa mupiro kudzora marara.
Ngatitii tinoshandisa '' ECO CIRCLE'kugadzira zvidimbu zviuru zvitatu zveT-shirts (pamusoro pei ton) zvinogona kudzokororwa ……
Inofananidzwa neyekugadzira uchishandisa petroleum extractor.
Yakapetwa-Yakatenderedzwa Flannel Blanket, Kukurumidza-Kuomesa Sports Shorts, Varume Vanokurumidza-Kuomesa Vakarukwa Mapfupi, Varume Vakasarudzika Sports Bhurugwa, Bhachi reMitambo, Mharidzo Kugadziriswa Uye Kugadzira,